Mapuraneti Gearbox | Mapuraneti Gearbox Vagadziri uye Vatengesi muchina
Mapuraneti Gearbox Vagadziri uye Vatengesi muchina | Mapuraneti Gearbox China
XL gearbox yemapuraneti (N dzakateedzana) inoshanda diki diki, kushanda kudiki kweruzha uye kugadzikana kukuru. Yese XL gearbox inoitwa kubvumidza kuenzanirana kugoverwa kwetoriki uchishandisa inorema basa mutoro unotakura kugona pane yakaderera-kumhanya shaft.
Ese mapuraneti magiya mabhokisi ari akaomeswa kune yakakura nzvimbo yakaoma. Izvi zvinoona kufambisa kugona mukati memasevhisi ehupenyu hwepasi redu regearbox.
Isu tine gumi nematanhatu emhando yemapuraneti magiya mabhokisi, eakasiyana torque assortment. Imwe neimwe modhi ine 16-1 matanho ekuderedza eakasarudzika magiya ratios. Zvisinei nekuti iwe unoda here mu-mutsetse kana kurudyi-kona mapuraneti giya. Ivo vanogona kuwanikwa mune yega yega murume nevakadzi kumisikidzwa.
Mapuraneti maGearboxes ndeyechokwadi epamberi michina yakakosha iyo iri chokwadi kunyangwe iko zvino yave kushandiswa kune nyowani yepasi pevhu kutyora matekinoroji senge 3D kudhinda, uye matsva matekiniki ekufambisa. Iyo mapuraneti gearbox china ndeimwe iyo inobuda uye yekuisa shafts inoenderana. Basa rayo rekutanga ringave rekuendesa rakanyanya huwandu hwetoriki neese mashoma huwandu hwenzvimbo. Iyo giya maitiro anosanganisira kudzikisira nyika, yekumhanyisa maitiro, uye kubatanidza. Hapana anonzwisisa kuti ndiani akagadzira bhokisi repasi repasi, zvakadaro zvinoramba zvichishandiswa zvichipiwa iro zana ramakore regumi nemashanu. Iyo yemapuraneti giya ichawana zita rayo kubva munzira iyo yainoita senge ichiri kushanda. Iko zvirokwazvo kune giya rezuva riri pakati rakanamirwa kumagiya ekuridza. Sezvo giya rezuva rinotenderera, uyezve, rinofambisa magiya ekuridza. Iwo magiya ezuva anonzi anonzi shaft yekuisa, nepo mutakuri uye magiya ekurira anonzi zvinobuda.
Iyo gearbox yemapuraneti inoshanda kubva kune zviyero kubva kune imwe.5: imwe kusvika 12000: 1. Mune iyo 3: 1 maitiro, iwe uchawana matatu maringi magiya uye rimwe chete zuva giya uye inonzi seimwe-nhanho yemapuraneti giya bhokisi. Mune zviyero zvinopfuura zvishanu: 1, maviri-danho repuraneti giya bhokisi rinoshandiswa. Mune 3: 1 system, giya rezuva rakakura kwazvo, tichienzanisa negear giya, uye mune gumi: chirongwa chimwe, iro giya rezuva rakakura zvakanyanya kukura zvichienzaniswa nemagiya emhete. Izvo zviyero zviri muzvizere manhamba. Iyo yeplanethi gearbox michina yakanyatsoiswa pamwe chete, zvisinei hazvo inogadzira kukakavara nekuda kwenzvimbo dzinofamba mukati - zuva giya uye giya giya. Izvi zvinoda lubrication pane imwe nguva kubva kumafuta, gel, kana mafuta. Ichi chinodikanwa chiripo mune mazhinji anofambisa michina michina.
Kune zvakawanda zvakaratidzwa zvakanaka zvekushandisa giya rekushandisa senge- katatu-fold torque kana uchienzaniswa neyakajairwa gearbox, mhedziso ratios, yakadzika kwazvo inertia, kushanda kwepamusoro, maitiro akavharwa, zvichingodaro. Iyo gearbox yemapuraneti ine mashandisiro ayo munzvimbo zhinji. Inogona kushandiswa kushandisa kuwedzera torque mu robot, kuderedza velocity mukudhinda michina yekudhinda, yekumisa, uye mune yekupakata michina kutumidza mashoma.
Kutenga gearbox kunoenderana nekushandisa kwakarongwa kwegearbox. Iwe unogona kuwana dzakasiyana dzakasiyana zvinhu zvekuchengetedza mune pfungwa senge - torque, backlash, ratio, ngura, kuramba, ruzha mwero, nguva yekuendesa, mutengo, uye kuwanikwa. Panogona kuve nezvimwe zvinotsanangurwa izvo zvave zvakasarudzika kune wese mutengi.
Bhokisi repasi repasiya chishandiso chepakati nepakati chakazvarwazve murudzi rwemazuva ano. Izvo pachazvo zvinotaura zvakawanda kwazvo maererano nekubatsira uye nekushandisa mumushini. Icho chishandiso chinoshanda cheichi chiito chinoita uye chakamira muyedzo wenguva, pasina kugashira kusisina basa.
Mugadziri wePlanetari Gearbox, Mapuraneti giya anodzora, Mapuraneti akagadzirirwa mota, Epicyclic gearing, Mapuraneti gearing, Gearboxes, anogona kuchinjanisa nekutsiva nerevini giya bhokisi, david brown giya bhokisi nezvimwewo.
Mapuraneti magiya mabhokisi anogona kuita akati wandei akasarudzika ekuderedza ratios nekuda kweakasiyana mapuraneti magiya anotenderera kumativi ese ezuva giya. Mapuraneti magiya mabhokisi akavakwa nehuremu hwesimbi simbi yerudzi urwu sesimbi uye nekudaro vakagadzirira kubata zvakakura kukatyamadza mitoro zvakanaka. Kunyangwe zvakadaro, akasiyana mapuraneti magiya mabhokisi akagadzirwa akasiyana nhanho, mutoro uye torque kugona. Iko kushandiswa kwakanyanya kwemapuraneti magiya mabhokisi ari mumotokari mota dzine otomatiki kutumira. Mukupesana nekutakurwa kwemanyorerwo, panguva iyo opareta anoona nezvekushandura magiya, mota dzine otomatiki kufambisa dzinoshandisa zvikwambo, mabhureki emabhureki nemabhokisi emagetsi epasi kuti achinje zvigadzirwa nezvinobuda, nekudaro achigadzirisa kumhanya nenzira.
Chinotakurika otomatiki inosanganisira maviri akazara emapuraneti magiya akaiswa pamwechete kuita chinhu chimwe chete. Mapuraneti magiya anokwenenzverwa anogona zvakare kushandiswa mune emagetsi screwdriver, mafafita uye zvinoshandiswa zvinodaidzira kuderedzwa kukuru kana kwakawanda kubva kune compact mashini. Mapuraneti magiya emabhokisi ari pakati pekusiyana kwekudzora kwekumhanyisa uye zvakakosha kuti mashandiro akanaka ashandiswe. Mabhokisi egiya anogona kutosanganisirwa kuti agadzire mhedzisiro inosarudzika pamwe nemhando dzakajairika ndeidzo dzinodzora mahonye, ​​honye dzinodzora uye inline gear inoderedza.
Mapuraneti magiya mabhokisi anowana mabhenefiti avo semhedzisiro yemamiriro avo. Nzvimbo yepakati yegiya inobvumira magiya epasi kutenderera ari munzira yakafanana uye neyegiyoni giya (kumucheto kweanotakura nyika) kupururudza nenzira imwecheteyo kubvira pagiya rezuva. Mune kumwe kurongedzwa, giya rezuva rinogona kubhenekesa imwe yemapuraneti panguva imwe chete sezvo ivo vachibatisa giya rin'i. Chero chipi zvacho chezvinhu zvako zvitatu chinogona kuve chekuisa, chakaburitswa kana chakamira chakamira, icho chinobudirira mune yakawanda yekusiyanisa kudzikisira ratidziro tarisiro.
Kune chero chikumbiro, ndapota taura nesu:
Kero: Ste B, Goridhe, Colorado, US.
Semumwe wevanotungamira vagadziri, vatengesi uye vatengesi vehonye gearbox, gearbox repasi, helical gearbox, cycloidal gearbox uye akawanda mamwe magiya ekumhanyisa gear. Isu tinopa zvakare yakagadzirirwa mota, mota yemagetsi, mota inowirirana, servo mota uye mamwe saizi mota.
Nyanzvi yekugadzira honye inoderedza, mapuraneti giya rinodzora, helical giya rinodzora, cyclo yokuderedza, dc mota, giya mota gadzira uye vatengesi.
Inotungamirwa naXINLAN 2020